သင် "ကောင်းစွာရေးသားခြင်းလှပသောဖြစ်ပါတယ် ... " ကြောင်းသိသလား? | Gadget သတင်း
နင်သိလား ... "ကောင်းမွန်စွာရေးသားခြင်းသည်လှပ၏"?
လက်ကိုင်ဖုန်းများပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့သည့်ကွန်ယက်များဖြစ်သော WhatsApp သို့မဟုတ် Telegram ကဲ့သို့သောလူမှုကွန်ယက်များ၊ တွစ်တာကဲ့သို့လူမှုရေးကွန်ယက်များပြန့်ပွားမှု၊ သုံးစွဲသူများစွာသည်တီထွင်ကြံဆမှုမှသုံးစွဲသူများကိုသူတို့လိုချင်သောအရာကိုဖော်ပြရန်၊ တိုက်ရိုက်အမှားရေးရန် ဦး ဆောင်နေသည်, အောင်ပွဲ၏မဟာမှတဆင့်စပိန်စာလုံးပေါင်း၏အခြေခံအကျဆုံးနှင့်မူလတန်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖြတ်သန်း။
ကျွန်ုပ်တို့ဘလော့ဂ်များ၊ လူမှုရေးကွန်ယက်များနှင့်အခြားသူများတွင်ဖော်ပြသည့်အရာသည်နောက်ဆုံးဒီဂရီစီမံကိန်းကဲ့သို့အရေးကြီးသည်။ ၎င်းကိုမည်သူမဆိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၎င်းကိုမှန်ကန်စွာရေးသားရမည်။ ၎င်းအတွက် Wiko နှင့် La Vecina Rubia တို့သည်ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့သည် ကောင်းစွာရေးသားခြင်းလှပသည်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများနှင့်မိုဘိုင်းပစ္စည်းများကိုကောင်းမွန်စွာရေးရန်၊ အသိပညာပေးရန်နှင့်သင်ကြားရန်သင်ကြားရန်ရည်ရွယ်သည်။
ကောင်းမွန်စွာရေးသားခြင်းသည်လှပသော ... နှင့်ချောမောသော၊ ရုပ်ဆိုး။ အရုပ်ဆိုးသော၊ အဆီနှင့်ဂျပိန်၊ ဆံပင်ရွှေရောင်နှင့်အညိုရောင်အတွက်ဖြစ်သည်။
လူကြိုက်များသောအချိုရည်အတွက်ထိုကြော်ငြာကိုသင်မှတ်မိပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ ငါတို့ကဒီဆောင်ပုဒ်ကိုသုံးနိုင်တယ် ကောင်းမွန်စွာရေးသားခြင်းသည်ရယ်စရာမဟုတ်ပါ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အမှားများပြုလုပ်တတ်သည်၊ သင်များများရေးသားလေ၊ သို့သော်အမှားများနှင့်အမှားများရှိပါသည်။
ကောင်းစွာရေးသားခြင်းလှပသည် application အသစ်တစ်ခုသည်သင်၏လက်ကိုင်ဖုန်းတွင်ကောင်းမွန်စွာရေးပြီးဆံပင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်စေရန် glitter ဖြင့်တီထွင်ခဲ့သည် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည် နည်းပညာထုတ်လုပ်သူ WiKo နှင့် La Vecina Rubia မှနောက်လိုက်နှစ်သန်းနီးပါးပါသည့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောတွစ်တာပရိုဖိုင်းမှလာပြီးဘဝ၏အကြီးမားဆုံးသောစိုးရိမ်မှုမှာ“ ဦး နှောက်နှင့်ဆံပင်ရှိခြင်း” ဖြစ်သည်။
ယခုအပလီကေးရှင်းကို Android ထုတ်ကုန်များအတွက် Play စတိုးတွင်ရနိုင်သည် လုံးဝအခမဲ့ နှင့်တစ် ဦး သတင်းအချက်အလက်သဘောသဘာဝ။ Wiko မှထောက်ပြသည့်ရည်ရွယ်ချက်မှာ -စမတ်ဖုန်းများမှတစ်ဆင့်စာလုံးပေါင်းခြင်း၊ စာရေးခြင်းနှင့်သဒ္ဒါကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်း၏အရေးကြီးမှုကိုအသုံးပြုသူများအားသတိထားမိစေရန်"။
ဒါကြောင့်ဒီ app ကကမ်းလှမ်းတာပါ "Rubitips" သို့မဟုတ် Cervantes ၏ဘာသာစကား၏အဓိက orthographic စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အတူအကြံဥာဏ်, « Rubiconsultas » La Vecina Rubia မှ RAE သို့ပို့သည်၊ ဘလော့ဂါက RAE သို့ပေးပို့ခဲ့သည်။ « Rubiurbanas Legends » ငါတို့ဘာသာစကား၏အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်။ မှားယွင်းသောဒဏ္sာရီနှင့်အတူ "Blondes ဂိမ်း", သင်ရရှိသောအသိပညာကိုစမ်းသပ်နိုင်လိမ့်မည်သည့်ဂိမ်း။
လှပသောသို့မဟုတ်လှပသောဖြစ်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးဖက်ရှင်သို့သွားခြင်း၊ သို့မဟုတ် Hilario Pino လုပ်လိုသည့်ဆံပင်ရှိခြင်းသည်မှန်ကန်စွာရေးသားခြင်းနှင့်မကိုက်ညီကြောင်းသတိရပါ။ စကားမစပ်၊ ငါဒီစာမူထဲမှာပါတဲ့စာလုံးပေါင်းအမှားကိုသင်ရှာဖွေနိုင်ပါ့မလား။ ကြည့်ပါ ဦး၊
ရေးသားသူ: အဆိုပါ Cuquiempresa
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » နင်သိလား ... "ကောင်းမွန်စွာရေးသားခြင်းသည်လှပ၏"?
Benjamin Doodle ဟုသူကပြောသည်
ဟိုဆေး။ ကြည့်စမ်း။ မင်းကိုဒီ application ကိုသာမက RAE Dictionary of တိုက်ရိုက်အသုံးချရန်လိုသည်။ Pan-Hispanic ၏သံသယများနှင့်ရံဖန်ရံခါစပိန် - အင်္ဂလိပ် - စပိန်စကားကိုသုံးရန်လိုအပ်သည်။
ငါဆံပင်ရွှေရောင်သို့မဟုတ်လှပသို့မဟုတ်တွစ်တာသို့မဟုတ် Pseudo- ကျော်ကြားမကျမည်အကြောင်း, ငါမူကားသင်၏ဥစ္စာကဲ့သို့ကွန်ယက်အားဖြင့်ရဲရင့်သောဖြစ်ကြောင်း magnas အနတ္တအသေးစိတ်ဖို့လုံလောက်တဲ့အလုပ်ယူပြီးအပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်။
PS: ပလက်တီနမ်၊ မက်ချီဆေးခြယ်သူများအားသူတို့၏ရိုးရိုးကိန်းဂဏန်းတွင်ပစ္စည်းအချို့ထည့်သွင်းရန်တာ ၀ န်ပေးခဲ့သည် (အချိန်ကာလသည်ကြာရှည်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြွယ်ဝသောအရသာမရှိခြင်း) အချိန်ဖြစ်သည်။
Benjamin Garabato အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ Benjamin Garabato သင်၏မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မင်းနဲ့မတူတာကမင်းရဲ့စကားတွေကလေးစားမှုကင်းမဲ့နေတဲ့အချိန်မှာတောင်ငါမကြိုက်တာကိုငါတောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သင်ကောင်းစွာရေးသားခြင်းသည်ကောင်းမွန်စွာရေးသားခြင်းသည်အမူအကျင့်ကောင်းများနှင့်မတူကြောင်းရှင်းနေပါသည်။
စကားမစပ်၊ ဤအက်ပလီကေးရှင်းသည်သင်မကြိုက်ပါကစာလုံးပေါင်းခြင်းနှင့်သဒ္ဒါအမှားများမလုပ်ဘဲမှန်ကန်စွာရေးသားခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်၊ ထို့အပြင်သတင်းအချက်အလက်များကို ရှင်းလင်း၍ မပေးသည့်ပိုလျှံသောနာမဝိသေသနများကိုဖြည့်စွက်ရန်မဟုတ်ပါ။
ငါ၏အ post ကိုဝေဖန်သင့်ရဲ့မှိုင်းအချိန်လေးသတ်ဖြတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါချစ်တယ်!
PS: စပိန်ဘာသာဖြင့် exclamation နှင့် question mark များကိုဝါကျ၏အစနှင့်အဆုံးမှာထားမည်။ နှင့်အူမကြီးပြီးနောက်, ကအနည်းဆုံးသင်ကမမှန်ကန်ကြောင်းပြုမိရှိရာနှစ်ခုကိစ္စများတွင်စာလုံးအသေး၌ရေးထားလျက်ရှိ၏။ ဘယ်လောက်စကားပြောပေမယ့်ပြီးတော့ ...
ဒီစနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာမင်းစည်းမျဉ်းနှစ်ခုစလုံးကိုလေ့လာဖို့အချိန်အနည်းငယ်အကုန်ခံနိုင်တော့မည် ဖြစ်၍ နောက်တစ်ကြိမ်အရူးမဖြစ်ရန်သင့်ကိုလင့်ခ်ျများကိုငါထားလိုက်ပြီ။ http://www.rae.es/consultas/ortografia-de-los-signos-de-interrogacion-y-exclamacion y http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=2a3yRXFBiD6rvDOMtq
တစ် ဦး ပွေ့ဖက်ချစ်လှစွာသောစာဖတ်သူကို!
Uber သည်စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင်လန်ဒန်တွင်စတင်လည်ပတ်တော့မည်ဖြစ်သည်